Nhau - Qingdao Yese Universe Machinery Equipment Co, Ltd yakavambwa muna2008 ……
Qingdao Yese Universe Machinery Equipment Co, Ltd yakavambwa muna2008 ……
Qingdao All Universe Machinery Equipment Co., Ltd rakaumbwa muna 2008, iri Qingdao inova yakanaka chiteshi guta muna Shandong Province. Ipa mhando dzakawanda dzekusimba michina senge trampoline, dhonza bhawa, kutenderera bhasikoro, mvura yekukwasva nezvimwe, ine makore mazhinji eOEM zviitiko uye isu takatumira zvigadzirwa zvedu kunyika zhinji.
Tinowana akawanda akanakirwa makomendi kubva kune vatengi vedu. Kambani yedu ine hupfumi ruzivo rwekugadzira, kugadzira mune zvekusimbisa michina, uye yakapasa ISO 9001 Quality Management System Certification, CE certification.
Iine zviuru makumi maviri nezvishanu zvemamirimita uye vashandi vanopfuura zana nemakumi mashanu, tinogara tichitenda kuti kutendeseka ndiko hupfumi hukuru. Tine chokwadi chekuti tinogona kupa zvaunoda nemasevhisi edu akanakisa. Kugadzira izwi rezita uye kubatisisa mamwe magariro mutoro sedanho rekupa mupiro mukusimudzira kwehutano chikonzero.
Hunhu uye sevhisi itsika yedu!
Ramba uchigadzira uye uchivandudza!
Kuti uve mutungamiri webhizinesi!
Isu tinovimba tichava sarudzo yako chaiyo!
Post nguva: Dec-03-2020
Bike Kutenderera, Exercise Bike Kutenderera, Pocket Massage Pfuti, Massage Pfuti 30 Kumhanya, Iron Gym Dhonza Up Bar, Diki Massage Pfuti,